1aviagem.com - सुझावहरू, साक्षात्कारहरू, कथाहरू पहिलो-पटक शौकियाले बताए
हाम्रो सामाजिक नेटवर्क
यूनाइटेड किंगडम, am बिहान चियाको भूमि र एक ठाउँ ढिला हुनु हुँदैन!
आज हामी बेलायतको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौं, यो देश its:०० बजे चियाको लागि परिचित छ, र ढिला नगर्नुहोस्! मेरो ब्रिटेनको पहिलो यात्रामा हीथ्रो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट लन्डन आइपुग्दा, यो पर्यटकलाई राम्रो लाग्ने कुनै चीज देख्न पहिले नै सम्भव थियो। एयरपोर्ट सबवेमा जोडिएको छ। र कहाँ ...
थप पढ्नुहोस् यूनाइटेड किंगडम, am बिहान चियाको भूमि र एक ठाउँ ढिला हुनु हुँदैन!
बेल्जियम - कमिकाहरु पढ्नको लागि आदर्श देश, बियर पिउँदा र चकलेट खाएको बेला
आज हामी बेल्जियमको बारेमा कुरा गर्नेछौं, यो एउटा यस्तो देश हो जुन कॉमिक्स, बियर र चकलेटहरूको बारेमा हो। मलाई आशा छ कि पढाइ रमाईलो छ! अन्तमा हामीसँग एक आश्चर्य हुनेछ (केवल ब्राजिलियालीहरूका लागि, अहिलेको लागि)। एन्ट्वर्प - हीराको राजधानी बेल्जियममा पुग्नको लागि उत्तम ठाउँ। यदि सम्भव छ भने, म ट्रेनको सिफारिश गर्दछु, किनभने पहिले नै भित्र ...
थप पढ्नुहोस् बेल्जियम - कमिकाहरु पढ्नको लागि आदर्श देश, बियर पिउँदा र चकलेट खाएको बेला
तपाईको आमा कतिवटा नोबेल पुरस्कार पाउन योग्य छ? - क्युरी परिवारले कम्तिमा २ स्थापना गर्यो - पोल्याण्ड र फ्रान्स
यस आमाको दिनमा म निम्न प्रश्नहरू उठाउन चाहन्छुः तपाईंको आमा कति नोबेल पुरस्कार पाउन योग्य छ? मलाई लाग्छ कि केवल हामीलाई जीवनको वरदान दिनको लागि, उनी पहिले नै एक योग्य छन्, अर्को हामीलाई समर्थन गर्न आउँदछ जबसम्म हामीसँग साहस हुँदैन र हामी आफ्नै खुट्टामा हिड्दैनौं। ठीक छ, क्युरी परिवारले कम्तिमा २…
थप पढ्नुहोस् तपाईको आमा कतिवटा नोबेल पुरस्कार पाउन योग्य छ? - क्युरी परिवारले कम्तिमा २ स्थापना गर्यो - पोल्याण्ड र फ्रान्स
ब्राजिलका कम्पनीहरूले किन ESG - पर्यावरण सामाजिक शासन अवधारणाको पालना गर्नुपर्दछ, र यसले सबैलाई कसरी फाइदा पुग्न सक्छ।
ESG के हो? ESG अवधारणा तिपाई बीच एक सन्तुलन हो: पर्यावरण, सामाजिक र एक व्यवसाय को शासन। यी प्रश्नहरूमा हामी कसरी उदाहरण दिन सक्छौं: वातावरणीय: वातावरणीय प्रश्नमा सामेल छ: जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोत, प्रदूषण, फोहोर र जैव विविधता। सामाजिक: सामाजिक मापदण्डमा हामी हाइलाइट गर्न सक्छौं: मानव पूंजी, सामाजिक अवसरहरू, ...
थप पढ्नुहोस् ब्राजिलका कम्पनीहरूले किन ESG - पर्यावरण सामाजिक शासन अवधारणाको पालना गर्नुपर्दछ, र यसले सबैलाई कसरी फाइदा पुग्न सक्छ।
अष्ट्रियाको पहिलो यात्रा - देश क्रान्तिकारी - भियना
क्वारेन्टाइनको फाइदा लिदै (COVID-19 को कारणले) ब्लग अपडेट गर्नका लागि। याद गर्नुहोस्, यदि तपाईं बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने, मास्क लगाउनुहोस्, यदि तपाईं खोप लिन सक्नुहुन्छ र स्वास्थ्य नियमहरू पालना गर्न सक्नुहुन्छ भने। त्यसोभए, के हामी अष्ट्रिया भ्रमण गर्ने छौं? जिज्ञासा दिमागमा राख्नुपर्ने पहिलो कुरा अस्ट्रियामा मुख्य भाषा जर्मन हो। तर रोक्नुहोस् ...
थप पढ्नुहोस् अष्ट्रियाको पहिलो यात्रा - देश क्रान्तिकारी - भियना
नेदरल्याण्ड्स? हल्याण्डको उच्च स्तर र विविधता
र क्वारन्टाइनको फाइदा उठाउँदै यस ब्ल्यागलाई अलि अलि अलि अलि अध्यावधिक गरौं। एउटा उत्तम विचार त्यो फोटो एल्बम समीक्षा गर्नु हो। र यसलाई समीक्षा गर्नुहोस्, जुन सायद "भविष्यको लागि यात्रा", र सांस्कृतिक ब्रह्माण्डको लागि थियो! हो, आज हामी हल्याण्डको बारेमा कुरा गर्नेछौं जुन देशले व्यावहारिक रूपमा सबै विषयहरूमा यति धेरै सिकाउँछ। हल्यान्ड हो ...
थप पढ्नुहोस् नेदरल्याण्ड्स? हल्याण्डको उच्च स्तर र विविधता
लिथुआनियाको पहिलो यात्रा - भिल्नियस - राम्रो साथीहरू देखेर
कुन कुराले मलाई सबैभन्दा धेरै प्रभावित गर्यो? बेलारुसका मेरो साथीलाई भेट्न जो गर्भवती पनि थिए, उनको पुरानो ब्राजिलियन साथीलाई फेरि हेर्न सीमा पार गरे, यो अनौंठो अनुभव थियो। र उनले अझै धेरै उपहारहरू ल्याइन्! मिन्स्कबाट आएको एक पिन र पोष्टकार्ड, र भाग्यको लागि बेलारुसका केही पुतलीहरू। (ओह र पनि कुकीज ...
थप पढ्नुहोस् लिथुआनियाको पहिलो यात्रा - भिल्नियस - राम्रो साथीहरू देखेर
किन प्राग हेलोवीन खर्च गर्न को लागी एक उत्तम ठाउँ हो? - चेक गणतन्त्र
हामी जान्दछौं कि अक्टूबर st१ लाई होलोवेन, वा, हेलोवीन, एक छुट्टि मानिन्छ जुन ब्राजिलियन क्यालेन्डरको आधिकारिक रूपमा अहिले सम्म छैन, तर विश्वको विभिन्न भागहरूमा मनाइन्छ। यहाँ ब्राजिलमा हामीसंग २ नोभेम्बर, छुट्टी र मृत दिन छ। तर किन चेक गणतन्त्र हो ...
थप पढ्नुहोस् किन प्राग हेलोवीन खर्च गर्न को लागी एक उत्तम ठाउँ हो? - चेक गणतन्त्र
माया र एजेटेकले हामीलाई महामारीको बारेमा के सिकाउँछ? - मेक्सिको
म्यान र एज्टेकले शताब्दियौंपछि पनि हामीलाई अझै धेरै सिकाउँछ! यदि हामी अलि बढी इतिहास हेर्छौं भने हामी सिक्न सक्छौं र केहि गल्तीहरू दोहोर्याउँदैनौं। के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि किन युरोपियनहरूले अमेरिकामाथि प्रभुत्व जमाए र अन्य बाटोहरूमा होइन? ठिक छ, यदि तपाईं यो प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ भने यो किनभने यो हो…
थप पढ्नुहोस् माया र एजेटेकले हामीलाई महामारीको बारेमा के सिकाउँछ? - मेक्सिको
सान्ताको भूमि यति सुन्दर किन छ? - फिनल्यान्ड - हेलसिंकी
मलाई थाहा छ कि क्रिसमस भन्दा अलि अलि अझै छ, तर म सान्ता क्लजको भूमिको बारेमा लेख्न चाहान्छु र किन त्यहाँ मेरो पहिलो यात्राको बारेमा कुरा गरेन? त्यसो भए फिन्सको बारेमा थोरै कुरा गरौं, यो कुशल र सहयोगी व्यक्ति। म फिनल्याण्डमा कसरी पुगें? मेरो पहिलो…
थप पढ्नुहोस् सान्ताको भूमि यति सुन्दर किन छ? - फिनल्यान्ड - हेलसिंकी
यो कतर एयरवेज, र डोहा एयरपोर्टको साथ कसरी उडान गर्ने हो।
यो कतार एयरवेजको साथ कसरी उडान गर्ने हो? के तपाईंलाई त्यो अवसर थाहा छ जुन तपाईंको जीवनमा देखा पर्दछ र त्यो मुश्किलले दोहोर्याउन सकिन्छ? यो सहि छ, यो कतार एयरवेजको साथ मेरो पहिलो यात्रा थियो। लिपि पहिले नै एशियाका लागि तयार थियो, तर बलको अपमानको कारणले हवाइ पूर्ण गर्न सम्भव थिएन, जुन…
थप पढ्नुहोस् यो कतर एयरवेज, र डोहा एयरपोर्टको साथ कसरी उडान गर्ने हो।
ब्राजिलमा हालसालै एउटा कथित वैचारिक युद्धको बारेमा धेरै कुरा भएको छ, "धेरै दायाँ" सोच्ने मान्छेहरू बिरूद्ध "बढी बायाँ" भन्ने बिचार गर्नेहरु बीच। तर के तपाईंलाई थाहा छ यी सर्तहरूको अर्थ के हो? हामी सुरू गर्नु अघि, यी सर्तहरू कहाँबाट आए भनेर हेरौं बाँया र दायाँको उत्पत्ति।…
के सियुदाद डेल एस्टेमा किनमेल गर्न लायक छ? - पराग्वे
ठिक साथीहरू, हामी संगरोधमा भएका कारण, मैले केहि पुराना फोटोहरू समीक्षा गर्ने निर्णय गरें र ती मध्ये बीचमा मैले प्याराग्वेको पहिलो यात्रा भेट्टाएँ। र मैले सोचें: वाह, तिनीहरू प्याराग्वेको बारेमा थोरै कुरा गर्छन्, किन म यसको बारेमा अलिक कुरा गर्न सक्दिन? र परिणाम यहाँ छ। कहाँ छ? पराग्वे दक्षिण अमेरिका मा छ ...
थप पढ्नुहोस् के सियुदाद डेल एस्टेमा किनमेल गर्न लायक छ? - पराग्वे
त्यहाँ, / / ​​/ २०१० (र बढ्दो) मा १०,१10.114 मरेका छन्, यी केवल COVID-१ of को कारणले हो। के पीडित वक्रले कर्भको शिखर हेर्न चाहनेहरूको लागि पर्याप्त माथि गयो? तपाईं मरेका मजदुरहरूसँग कसरी अर्थतन्त्र बचत गर्नुहुन्छ? यदि तपाईं विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई कसरी आकर्षित गर्नुहुन्छ यदि तपाईं उनीहरूको छवि मृत्युसँग जोड्न चाहनुहुन्छ? तिनीहरू ...
ब्यारोलोचेका लागि Argentina-दिनको यात्रा - अर्जेन्टिना
ब्यारोलोचेका लागि--दिनको यात्रा - अर्जेन्टिना र क्वारेन्टाइनको समयमा पुरानो एल्बम लिनु र फोटोहरू हेर्नु भन्दा राम्रो अरू केही छैन। जसले मलाई अर्जेन्टिनामा रहेको बारिलोचेमा पहिलो पटक यात्रा गर्यो। म शहरमा3दिन मात्र बसेँ, र दुई स्टेशनहरू समात्न म सफल भएँ। सूर्य र हिउँ र ...
थप पढ्नुहोस् ब्यारोलोचेका लागि Argentina-दिनको यात्रा - अर्जेन्टिना
Mayans र संसारको अन्त को पूर्वानुमान - मेक्सिको
मायाले हामीलाई संसारको अन्त्यको बारेमा के सिकाउन सक्छ? केहि समय अघि २०१२ मा धेरैले संसारको अन्त्यको बारेमा सुनेका थिए। र म्यान सभ्यता वरिपरिको धेरै रहस्यवाद उठेको थियो। सबै पछि, अफवाहहरु म्यान पात्रो अनुसार, संसार मा अन्त हुनेछ भनेर भन्यो ...
थप पढ्नुहोस् Mayans र संसारको अन्त को पूर्वानुमान - मेक्सिको
पिलानेसबर्ग पार्क - एक फोटो सफारी र पशु पाठ - दक्षिण अफ्रिका
नमस्कार साथीहरु, यो पोस्ट दक्षिण अफ्रिकाको मेरो पहिलो यात्राको बखत सिकेका सुझावहरू र पशु व्यवहारको मिश्रण हुनेछ। क्रुगर पार्कमा सल्लाहहरू अधिकांश व्यक्तिहरू जसले दक्षिण अफ्रिका जाने बारे सोच्दछन्, वा जो त्यहाँ आएका छन् सोच्दछन्। एक फोटोग्राफिक खेल ड्राइभ सफारी गर्न। यो ...
थप पढ्नुहोस् पिलानेसबर्ग पार्क - एक फोटो सफारी र पशु पाठ - दक्षिण अफ्रिका
हामीले एक मेक्सिकन महिलालाई अन्तर्वार्ता लियौं र मेक्सिकोमा कोरोनाभाइरस सिफारिसहरू र सुझावहरू ल्यायौं
हामीले एक मेक्सिकन महिलालाई अन्तर्वार्ता ल्यायौं र कोरोना भाइरस र मेक्सिकोको बारेमा सुझावहरू लिएर आएका छौं। मैले एरिकालाई रियो दि जेनेरियोको खाना खाने समयमा भेटे। र उनी हाम्रो टुर ग्रुपमा सामेल भए र हामीले त्यहि तालिका साझेदारी गरेका छौं। हाम्रो टेबुल कत्तिको अन्तरराष्ट्रिय थियो भनेर एरिका अलि अलि उत्सुक थिइन्। हामीसँग मान्छेहरू थिए ...
थप पढ्नुहोस् हामीले एक मेक्सिकन महिलालाई अन्तर्वार्ता लियौं र मेक्सिकोमा कोरोनाभाइरस सिफारिसहरू र सुझावहरू ल्यायौं
यो नि: शुल्क सार्वजनिक यातायात हुन कसरी सम्भव छ? - एस्टोनिया - तल्लिन
इस्टोनियाको राजधानी टल्लिनमा हाम्रो पहिलो यात्रामा, जब हामी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा आइपुग्यौंौं तब हामी एक अनौंठो एयरपोर्टबाट छक्क भयौं। वास्तवमा यो जस्तो देखिन्थ्यो यो यो छ कि यो एक राम्रो र सबैभन्दा सुखद एयरपोर्ट हुन डिजाइन गरिएको थियो। म स्वीकार गर्दछु कि मेरो यात्राको क्रममा केही एयरपोर्टहरू ... जस्तो देखिन्छ।
थप पढ्नुहोस् यो नि: शुल्क सार्वजनिक यातायात हुन कसरी सम्भव छ? - एस्टोनिया - तल्लिन
गेबोरोन आकर्षणहरू - बोत्सवाना
के गैबरोनमा - बोत्सवाना मेरो पहिलो अफ्रिका यात्रामा मैले दक्षिण अफ्रिका र बोत्सवाना बीचको सीमा पार गर्ने निर्णय गरें। जे भए पनि, ब्राजील अफ्रिकी महाद्वीपबाट अलि टाढा छ। त्यसैले यो एक राम्रो विचार को लागी सीमा पार गर्न र बोत्सवाना जस्तै देखिन्थ्यो भने हेर्नुहोस् ...
थप पढ्नुहोस् गेबोरोन आकर्षणहरू - बोत्सवाना
दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रिकीको साथ अन्तर्वार्ता। र अन्तर्वार्ताको बीचमा एक अप्रत्याशित परिवर्तन भयो।
मैले सुरु गर्नु अघि मैले यो भन्न आवश्यक छ कि यो अन्तर्वार्ता पूर्ण रूपमा अफहन्डमा गरिएको थियो। हामीसँग लिपिको बारेमा सोच्न समय थिएन र यो केवल इच्छाशक्तिबाट गरिएको थियो। लेक्सिघको आफ्नै सुझावमा। उनी प्रामाणिक केहि चाहन्थे! यसलाई प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका भनेको यसै कार्यमा गर्नुपर्नेछ, सेल फोन रेकर्ड गर्न प्रयोग गरेर र…
थप पढ्नुहोस् दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रिकीको साथ अन्तर्वार्ता। र अन्तर्वार्ताको बीचमा एक अप्रत्याशित परिवर्तन भयो।
रिगामा के यात्रा गर्ने? शहर जुन नयाँ र पुरानो वास्तुकलालाई एकजुट गर्दछ - लाटभिया
खैर, मैले रीगाको बारेमा कुरा गर्नु भन्दा पहिले, मैले त्यहाँ किन अन्त्य गरें? विश्वका सबै देशहरू भ्रमण गर्ने इच्छामा, वा कम्तिमा प्राय: लातविया सडकको बीचमा थियो, र सडकको बीचमा लाटभिया थियो। एस्टोनिया र लिथुआनियाको बीचमा।- अचम्म मान्नु पर्ने बित्यो…
थप पढ्नुहोस् रिगामा के यात्रा गर्ने? शहर जुन नयाँ र पुरानो वास्तुकलालाई एकजुट गर्दछ - लाटभिया
१- म किन बान्को इन्टर सिफारिस गर्दछु? यदि तपाईंलाई ब्राजिलियाली जाँच खाता चाहिएको छ भने, कुनै कारणका लागि हो, यो किनभने तपाईं यहाँ ब्राजिलमा बस्नुहुन्छ, वा कामको कारणले, वा अध्ययन गर्न आउनुभएको छ, चाहे पर्यटनको कारण हो, वा विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउन वा प्राप्त गर्न। सुझाव त्यो हो…
थप पढ्नुहोस् इन्टर बैंक
लक्जमबर्ग - विश्वको अन्तिम ग्रान्ड डची
लक्जमबर्ग युरोपको सानो देश हो, छिमेकी फ्रान्स, बेल्जियम र जर्मनी। र किन यो हेर्न लायक छ? किनभने उहाँ संसारमा अन्तिम ग्रान्ड डचि हुनुहुन्छ। र तपाईं आफैलाई सोध्न सक्नुहुन्छ: ग्रान्ड डची भनेको के हो? सरल जवाफ: यो एक देश हो, जुन एक निर्वाचित राष्ट्रपतिको सट्टामा, ग्रान्ड ड्यूक हुन्छ जो…
थप पढ्नुहोस् लक्जमबर्ग - विश्वको अन्तिम ग्रान्ड डची
बार्सिलोना मा के गर्ने बारे सल्लाह
बार्सिलोना असाधारण वास्तुकला मन पराउनेहरूका लागि उत्कृष्ट छ। तल सूचीकृत पर्यटक स्थलहरूको façades र आन्तरिक कुनै पनि आगन्तुकलाई अद्वितीय र वर्ग अनुभव बाहिर ल्याउँछ। यदि यो बार्सिलोनामा तपाईंको पहिलो यात्रा हो भने, यी सुझावहरूको पालना गर्नुहोस्: १- भाषा: पहिलो कुरा तपाईंले याद गर्नुहुनेछ ...
थप पढ्नुहोस् बार्सिलोना मा के गर्ने बारे सल्लाह
मलाईँ यो पोष्ट कसरी सुरु गर्ने भनेर थाहा छैन, त्यसैले म तपाईंलाई उनको विचार के हो बताउनेछु। यसले नोट्रे-डेम क्याथेड्रललाई श्रद्धांजलि अर्पण गर्दैछ, जुन अप्रिल १ 15, २०१ 04 मा आगो लगाइयो। यो यस्तो चीज हो जसले धेरै मानिसहरूलाई उत्प्रेरित गर्छ, यस तथ्यले ल्याएको हंगामा र उदासीनताका साथ। मेरो लागि जो साथीहरू र फ्रान्सको साथ यात्रा गर्दै थिए।
पेरिस वरिपरि कसरी प्राप्त गर्ने?
अघिल्लो पोस्टमा प्रतिज्ञा गरिएको अनुसार, अर्को पटक म पेरिसको बारेमा कुरा गर्न गएँ मैले यहाँ केही सुझावहरू तपाईको लागि ल्याउने थिएँ। (पोष्ट जहाँ म यो प्रतिज्ञा गर्दछु त्यो एक हो) त्यसो भए यो वाचा बाँच्नको लागि समय आयो। तपाईंले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको तपाईंको सुरूवात विन्दुलाई परिभाषित गर्नु हो ...
थप पढ्नुहोस् पेरिस वरिपरि कसरी प्राप्त गर्ने?
अघिल्लो पोस्टमा हामीले पेरूको महिला र पेरूको बारेमा ब्राजिलका पर्यटकसँग अन्तर्वार्ता लिएका थियौं। (तपाईं यहाँ क्लिक गरेर यो उत्कृष्ट अन्तर्वार्ता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ)। उहाँकै कारणले मैले पेरूको कोका चियाको बारेमा जिज्ञासा ल्याउने निर्णय गरें। कोका चिया पहिलो उत्सुकता भनेको कोका चिया त्यहाँ लगिएको छ ...
आज हामी भाषाहरूको बारेमा कुरा गर्छौं किन फ्रान्सेलीहरूले उनीहरूको नाकमा झिम्काइन्छन् जब हामी उनीहरूसँग अंग्रेजी बोल्छौं। खैर, लगभग सबै व्यक्तिहरुमा मैले फ्रान्सको बारेमा कुरा गरें, र जो त्यहाँ आएका छन्, जहिले पनि दुई कुरा भन्छन्: कि त्यहाँ सुन्दर, अद्भुत ठाउँ छ। र यदि फ्रान्सेलीहरूले उनीहरूको नाक झिम्काए भने ...
निगारा फल्स बनाम Foz do Iguaçu सबैभन्दा राम्रो झन्डा के हो?
नमस्कार साथीहरु र आज हामी झरनाको बारेमा कुरा गर्नेछौं! र ठूला मध्ये दुई। कुन राम्रो छ: नायाग्रा जलप्रवाह वा फोज डो इगुआउ? र ती मध्ये कुन ठूलो हो? हामी सुरू गर्नु अघि म यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि यो आधिकारिक डाटाको साथ गरिएको तुलना हो जुन मैले फेला पारेको छु। र दोस्रो प्रश्न हो ...
थप पढ्नुहोस् निगारा फल्स बनाम Foz do Iguaçu सबैभन्दा राम्रो झन्डा के हो?
यस ब्लगको सदस्यता लिन र नयाँ प्रकाशनहरू प्राप्त गर्न तपाईंको ईमेल प्रविष्ट गर्नुहोस्।
द्वारा प्रो थिम डिजाइन
सेप्टेम्बर को 07 मा सेतो ipes ... हामीलाई शान्ति को यो महत्वपूर्ण सन्देश दिन को लागी धन्यवाद।
गाह्रो समयमा एक # आईपीê जस्तो हुनुहोस् जुन # सुख्खा # फ्लाभरहरूमा पनि र आफैंको ठाडो रहनको लागि यसको बलियो # रुटहरूले कुवाको मुनिबाट पानी निकाल्छ। र यसले उनीहरूका लागि # छाया पनि गर्छ जसले तिनीहरूलाई पनि याद गर्दैन तर जब तिनीहरू फूल्दैनन्। धन्यवाद आईप्स। #यसकाे बारेमा साेच
हाम्रो # बर्डको # लकमा हेर्नुहोस् # सफलता
226 अन्य सदस्यहरू सामेल
एक टिप्पणी लेख्नुहोस्